Mangareader.net to ebook - Saturngod
အစကတော့ အဲဒီ file နဲ့ epub လုပ်တာကို python နဲ့ ရေးထားပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ruby က gem သီးသန့် ထပ်သွင်းရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ruby script ကို ကြည့်ပြီးတော့ python နဲ့ ပြန်ရေးဖြစ်တယ်။ အခုနောက်ဆုံး version ကိုတော့ pdf ပါ support လုပ်အောင် ဖန်တီးပေးထားပါတယ်။
မူရင်း script အတိုင်း mangareader.net မှာ manga ရဲ့ ပတ်လမ်းကြောင်း ပေးလိုက်တာနဲ့ အဲဒီ chapter က စပြီး အဆုံးထိ download ချသွားပါလိမ့်မယ်။ connection တော့ အတော်အသင့် ကောင်းဖို့လိုပါတယ်။
အသုံးပြုဖို့အတွက် python 2.7 ကို သွင်းထားပေးဖို့ပဲ လိုပါတယ်။
https://github.com/saturngod/mangareader-to-ebook/blob/master/README.md မှာ သုံးပုံသုံးနည်း ကို ဖတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်။
Script ကိုတော့ ဒီမှာ download ချနိုင်ပါတယ်။
« iOS Developer Life :: Part II Why Twitter bought posterous »
kyaw khine says:
ရဘူးဗျ naruto ကိုဒေါင်းတာ ဒေါင်းလို့ရဘူး One Piece လည်းရဘူး ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟင် သူတို့ လင့်တွေက အစပိုင်းမှာ ဒီလိုတွေချည်းပဲ http://www.mangareader.net/93-1-1/naruto/chapter-1.html ခုနောက်ပိုင်းမှသာ http://www.mangareader.net/naruto/570 ဒီလိုဖြစ်သွားတာ အဲ့ဒါကြောင့်လားသိဘူး
It should be OK. Let me check again.
$python mdl.py http://www.mangareader.net/bleach/482 Bleach
အဲလို ဘယ်နားမှာ ရိုက်ပြီး ဘယ်လို run ရမှာလဲ အစ်ကို script နဲ့ python 2.7 ကို download လုပ်ပြီးပါပြီ
ဘယ်လို သုံးရမလဲဆိုတာ မရှင်းဘူးဖြစ်နေလို့ပါ
download လုပ်ချင်လို့ ကူညီပေးပါဗျာ
did you install python ?
Try python on cmd.
( Run -> Type cmd -> Enter . Blank Screen will appear. Type python -> Enter )
If you can type python , go to the download path that exist mdl.py
C:\_> cd C:\_mdl\_
C:\_mdl\_> python mdl.py http://www.mangareader.net/bleach/482 Bleach
iOS Developer Life :: Part II